surah an-nur Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: surah an-nur
Axadii Baarta ama caeenta cagaarta cagaaran ee Ciise Masiix galay Yuurasalem wuxuu bilaabay todobaadkiisii ama usbuuciisii ogu dambeeyay. Suuradda Al-Anbya (Suuradda 21 – Nabiyadii) waxay noo sheegaysaa:
Tiina (Xusuuso) Dhawrtay Xubinteedaa waa (maryama) oon ku Afuufnay Dhexdeeda Ruuxdanadii kana yeellay iyada iyo Wiilkeeda Calaamadda Caalamka.
Suuradda Al-Anbya 21: 91
Suuradda al-Anbya waxay si cad u sheegaysaa in Eebbe ka dhigay Ciise Masiix calaamad dadka oo dhan, maahan oo keliya dadka qaar sida Masiixiyiinta ama Yuhuudda. Sidee Ciise Masiix kuligeen loogu sameeyey ‘calaamad’? Abuurka Eebbe ee adduunka wuxuu ahaa mid caalami ah oo u dhexeeya dhammaan dadka. Marka maalin kasta oo ka mid ah usbuucan ugu dambeeya Ciise Masiix wuxuu hadlay oo u dhaqmay qaab tilmaamaya lixda maalmood ee Abuurka (Quranka iyo towered waxaay barayeen in Ilaah wax weiiba ku abuuray lix maalmood).
We Waxaan bilaabaynaa inaan maalin kasta ee usbuuca ugu dambeeyay ee Ciise Masiix, waxaan ogaaneynaa siday dhammaan waxbaradiisa iyo ficilkiisu ay ahaayeen calaamado tilmaamaya Abuurista. Tani waxay muujineysaa in dhacdooyinka maalin kasta ee toddobaadkan uu Eebbe u qoondeeyay bilowgii waqtiga – mana aha wax fikrad bini-aadam ah maaddaama aadanuhu isku dubbaridi karin dhacdooyinka ay ku kala baxaan kumanaan sano. Waxaan bilaabeynaa Axada – Maalinta Koowaad.
Maalinta Koowaad – Iftiinka Gudcurka
Suuradda An-Nuur (Suuradda 24 – Iftiinka) waxay bixisaa tusaale ‘Iftiin’. Waxay leedahay:
Eebe waa Nuuriyaha Samooyinka iyo Dhulka, Nuurkiisu wuxuu la mid yahay Daaqad Misbaax ku Jiro Misbaaxuna ku Jiro Dhalo, Dhaladana aad Mooddo Xiddig lfi lagana Huriyey Geed la Barakeeyay oo ah Zaytuun (Saliidd leh) oon bari iyo Galbeed midna ahayn, waxayna u Dhawdahay Saliideedu inay iska Ifto Yuuna Taabaninba Dabe, waa Nuur lagu kordhiyay Nuur, wuxuuna ku Hanuuniyaa Eebe Nuurkiisa Cidduu Doono, wuxuuna u Yeelaa Eebe Dadka Tusaale, Eebana wax kasta waa Ogyahay.
Suuradda An-Nuur24: 35
Masaalkan wuxuu tixraacayaa Maalintii Koowaad ee Abuurka markii Eebbe abuuray Nuurka. Towreed wuxuu leeyahay:
3 Ilaahna wuxuu yidhi, Iftiin ha ahaado: iftiin baana ahaaday.
4 Ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay: Ilaahna iftiinkii ayuu ka soocay gudcurkii.
5 Ilaahna iftiinkii wuxuu u bixiyey Maalin, gudcurkiina wuxuu u bixiyey Habeen. Waxaana jiray fiid iyo subax, isla maalin ah.
6 Ilaahna wuxuu yidhi, Meel bannaani ha noqoto biyaha dhexdooda, oo iyadu biyaha ha ka soocdo biyaha.
Bilowgii 1: 3-6
Eebbe wuxuu ka hadlay Iftiinka jiritaanka Maalintii ugu horreysay ee Abuurka si mugdiga looga saaro. Calaamad ahaan in la muujiyo in dhacdooyinka saacaddaas la qorsheeyey ilaa Maalintii ugu horreysay ee Abuurka, Masiixa wuxuu ka hadlay inuu yahay Iftiin mugdi ka saaraya.
Iftiinka ayaa u ifaya dadka aan Yuhuudda ahayn
Ciise Masiix Wuxuu Yuurasalem ku soo galay isagoo dameer dushiis saran. siduu nebi Sakariyaah u sii sheegay 500 sano ka hor, isagoo sidaas samaynaya maalintii saxda ahayd ee nebi Daaniyeel u sii sheegay 55o sano ka hor. Ciidda Kormaridda ee soo socoto Yuhuuddu waxay oga imaanayeen dalal badan, sidaa darteed Yuurasalem waxaa ku sugnaa dad badan oo Yuhuud xujaay ah (sida Maka waqtiga Xajka). Sidaa darteed imaatinka Ciise ayaa buuq ka dhex abuuray Yuhuudda. Laakiin Yuhuudda oo keliya ma ahayn kuwa ogaaday imaatinka Ciise Masiix. Injiilku wuxuu qorayaa wixii dhacay isla markii uu soo galay Yeruusaalem waa sida ku qoran
Yooxanaa 12: 20-22
Caqabadahii udhaxeysay Griigta iyo Yuhuuda waqtigii Ciise
Waxay ahayd wax aan caadi u ahayn dadka Gariigta ah, (taasi waa kuwa aan Yuhuudda ahayn ama kuwa aan Yuhuudda ahayn), inay joogaan iid Yuhuudda. Griigii iyo Roomaankii waagaas, maadaama ay mushrikiin ahaayeen, Yuhuuddu waxay u haysteen kuwo nijaas ah oo ay ka fogaadeen. Badankoodna Griiggu waxay u tixgeliyeen diinta Yuhuudda kaliya hal (aan la arkaynin) Ilaah iyo ciidaheeda inay yihiin doqonno. Waqtigaas, Yuhuudda oo keliya ayaa tawxiid ahaa. Marka shucuubtaasi waxay si joogto ah u kala joogeen midba midka kale. Maaddaama dadka aan Yuhuudda ahayn, ama aan Yuhuudda ahayn, bulshada ay marar badan ka ballaarneyd bulshada Yuhuudda, Yuhuuddu waxay ku noolaayeen nooc ka mid ah go’doominta adduunka intiisa badan. Diintooda kaladuwan, cuntadooda xalaasha ah, kitaabkooda khaaska ah ee nebiyada ayaa abuuray caqabad udhaxeysa Yuhuudda iyo Gariigta, iyadoo qolo waliba cadaw ku tahay dhinaca kale.
Maalmaheena, oo mushriki iyo sanam caabudid ay inbadan oo aduunyadu diideen, waxaan si fudud u ilaabi karnaa sida ay tani uga duwaneyd waqtigii Ciise. Xaqiiqdii, maalintii Ibraahim , qof walba marka laga reebo nebigaas waxaay aheen mushrikiin. Waqtigii Nebi Muuse, ummadaha kale oo dhami waxay caabudi jireen sanamyo, iyadoo Fircoon laftiisu sheeganayay inuu ka mid yahay ilaahyada. Reer banu israa’iil waxay ahaayeen jasiirad yar oo tawxiidku ka jiro badweynta cibaadada sanamyada ee umadaha hareerahooda oo dhan. Laakiin nebi Ishacyaah (750 BCE) ayaa loo ogolaaday inuu arko mustaqbalka oo wuxuu saadaaliyay isbadal ku yimaada quruumahan oo dhan. Wuxuu qoray:
anu waa wixii Ishacyaah ina Aamoos la tusay ee uu ku arkay wax ku saabsan dalka Yahuudah iyo Yeruusaalem waagii ay Cusiyaah, iyo Yootam, iyo Aaxaas, iyo Xisqiyaah boqorrada ka ahaayeen dalka Yahuudah.
2 Samooyinkow maqla, dhulkow bal wax dhegayso, waayo, Rabbigu wuu hadlay oo yidhi: Carruur baan quudiyey oo koriyey, oo iyana way igu caasiyoobeen.
3 Dibigu kan isaga leh wuu yaqaan, oo dameerkuna waa yaqaan meeshuu wax ka cuno ee sayidkiisa, laakiinse reer binu Israa’iil waxba ma yaqaaniin, oo dadkayguna waxba garan maayaan.
4 Hoog waxaa leh quruuntan dembiga badan, iyo dadkan xumaanta ku raran, iyo dhashan xumaanfalayaasha, iyo wiilashan si xun u macaamilooda. Iyagu Rabbiga way ka tageen, oo waxay quudhsadeen Ka Quduuska ah ee reer binu Israa’iil dib bayna uga noqdeen.
5 Bal maxaa mar dambe wax laydiinku dhufan doonaa, oo aad u sii fallaagoobi doontaan? Madaxa oo dhammu waa bukaa, oo qalbiga oo dhammuna waa taag daranyahay.
6 Madaxa iyo minjaha inta ka dhex leh innaba caafimaad ma leh, laakiinse waxaa ku yaal nabro, iyo burbur, iyo boogo cusub, lama awdin, lamana duubin, oo saliidna laguma dhayin.
Ishaaciya 49:1, 5-6
4 Dadkaygow, i maqla, oo quruuntaydoy, dhegta ii dhiga, waayo, sharci baa iga soo bixi doona, oo caddaaladdaydana waxaan ka dhigi doonaa inay dadyowga iftiin u noqoto.
are joogso, oo dhalaal, waayo, iftiinkaagii waa yimid, oo ammaantii Rabbiguna way soo baxday oo ku iftiimisay.
2 Waayo, bal ogow, dhulka gudcur baa dabooli doona, oo dadyowgana mugdi dam ah ayaa qarin doona, laakiinse Rabbigaa soo bixi doona oo ku iftiimin doona, oo ammaantiisana korkaagaa lagu arki doonaa.
3 Oo quruumo baa iftiinkaaga u iman doona, oo boqorrona waxay u iman doonaan dhalaalka sarakiciddaada.
Haddaba nebi Ishacyaah wuxuu sii sheegay in imaatinka ‘addoonka’ Rabbi, in kastoo Yuhuud (‘qabiilooyinka Yacquub’) uu ‘iftiin u noqon doono dadka aan Yuhuudda ahayn’ (dadka aan Yuhuudda ahayn oo dhan) oo iftiinkani wuxuu gaari doonaa dhammaadka dhulka. Laakiin sidee bay tan ku dhici kartaa iyadoo caqabaddan u dhexeysa Yuhuudda iyo Yuhuudda ay sii socon doonto boqollaal sano?
Maalintaas markuu Ciise soo galay Yeruusaalem nuurku wuxuu bilaabay inuu soo jiito dadkii ugu horreeyay ee aan Yuhuudda ahayn sida aan aragno qaar u soo dhowaanaya nebiga. Halkan xafladdan Yuhuudda waxaa joogay Griig u safray Yeruusaalem si ay wax uga bartaan Ciise Masiix . Laakiin miyay u arki lahaayeen, inay Yuhuudda xaaraan u tahay, inay arki karaan Ciisea? Waxay weydiiyeen asxaabtii Ciise, yaa u keenay codsiga nabiga. Muxuu odhan lahaa Miyuu u oggolaan doonaay Griigta, oo wax yar ka yaqaan diinta saxda ah, inay la kulmaan? Injilku isagoo ku sii socday ayaa yiri:
29 Haddaba dadkii badnaa oo ag taagnaa, way maqleen, oo waxay yidhaahdeen, Waa onkod. Qaar kale waxay yidhaahdeen, Malaa’ig baa la hadashay isaga.
36 Intaad nuurka haysataan, rumaysta nuurka, inaad noqotaan wiilasha nuurka. Waxyaalahaas Ciise ayaa ku hadlay, markaasuu ka tegey oo ka dhuuntay iyaga.
Yooxanaa 12: 23-50
Is-weydaarsigan xiisaha leh, oo ay ku jiraan xitaa cod samada ka yimid, Nebigu wuxuu sheegay in ‘kor loo qaadi doono’ tanina ay ‘dadka oo dhan’ u soo jiidi doonto – maaha Yuhuudda oo keliya – naftiisa. Dad badan oo Yuhuud ah, in kasta oo ay caabudaan hal Ilaah oo keliya, ma aysan fahmin waxa Ciise sheegayo. Nebi Ishacyaah wuxuu sheegay inay ugu wacan tahay qalbiyadooda adag – oo aan doonayn inay u hogaansamaan Eebe – taasi waxay salka ku haysay, xitaa sida kuwa kale ee aamusnaa u rumaysteen cabsi darteed.
Ciise Masiix wuxuu si geesinimo leh u sheegtey inuu ‘dunida u yimid sida nuur’ (aayadda 46) siday nebiyadii hore qoreen oo u ifin doono quruumaha oo dhan. Maalintii uu galay Yeruusaalem, nuurka ayaa markii ugu horraysay ka ifay quruumaha. Iftiinkan miyuu ku faafi doonaa quruumaha oo dhan? Muxuu nebigu ula jeeday in isaga ‘kor loo qaadayo? Waxaan soo wadnay ilaa todobaadii hore si aan u fahamno su’aalahan.
Jaantuska soo socdaa wuxuu sheegayaa maalin kasta oo toddobaadka. Axaddii, maalintii ugu horreysay ee toddobaadka wuxuu fuliyay saddex waxsii sheeg oo kala duwan oo ay bixiyeen saddex nebi oo hore. Marka hore wuxuu ku soo galay Yeruusaalem isagoo dameer saaran siduu wax oga sii sheegay Sekaryaah. Marka labaad, wuxuu sidaas yeelay wakhtigii nebi Daanyeel sii sheegay. Ta saddexaad, farriintiisa iyo mucjisooyinkiisa waxay bilaabeen inay iftiimiyaan xiisaha ka dhex jira dadka aan Yuhuudda ahayn – oo nebi Ishacyaah sii sheegay inuu iftiin u noqon doono quruumaha oo u sii iftiimi doono dadyowga adduunka.
Dhacdooyinka Toddobaadka xiisaha badan – Maalinta 1aad – Axadda
Author [email protected]Posted on 21/11/2020 06/03/2021 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags Isa al Masih light umadaha, isa iyo quruumaha, noor, surah al nur, surah an-nur, surah light, suurat Al-AnbiyaLeave a comment on Maalinta 1aad: Ciise Masiix – Nuurkii Quruumaha